Madaxweynaha Maamulka Puntland Oo Maanta U Safray Dalka Itoobiya + Sawirro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
20th November 2017 Xuseen Axmed Af Soomaali 0
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefdi balaaran oo uu Hogaaminayo ayaa maanta 20 Nov 2017 Safar shaqo ugu ambabaxay dalka Ethiopia.
Madaxweynaha iyo wefdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Kanooko ee Magaalada Garoowe kusii sagootiyey Madaxweyne ku-Xigeenka Puntland Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey, masuuliyiin ka tirsan goleyaasha Puntland, qaar kamidda saraakiisha Ciidamada Puntland iyo Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay muhiimadda safarkisa ayaa sheegay inuu dalka Ethiopia gaar ahaan Caasimadda dalkassi u aadidoono arrimo la xidhiidha Ganacsiga, Amaanka iyo Siyaasadda guud ee Puntland, waxaana uu xusay Madaxweynuhu in safarkiisu qaadan doono muddo shan cisho ah.
“waxaan saaka u safraynaa aniga iyo wefdigayguba Magaalada Addis-Ababa ee Caasimadda dalka Ethiopia oo aan ku tegi doono socdaal muddo shan cisho ah oo ah safar shaqo, kaas oo aanu rabno inaanu dawladda Ethiopia kala soo xaajoono hawlo badan oo la xidhiidha dhanka Amniga, Ganacsiga iyo Siyaasadda guud ee Puntland oo dhanba” ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa xusay in isaga iyo weftigiisuba kulamo la qaadan doonaan madaxda dalkaasi ugu saraysa, isla markaana ay kala xaajoon doonaan arrimaha kor-kuxusan, waxaana uu Madaxweynuhu Alle ‘SWC’ ka rajeeyey inuu safarkoodu kuso dhammaado Guul.
“Waxaan is arki doonaa Madaxda ugu saraysa dalkaasi ‘INSHA ALLA’, waxaanna rajaynayaa inuu guul kusoo dhammaado safar-kayagu” ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.